Tirada xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo lagu soo koobi doono 225 mudane; baarlamaanka oo yeelan doona laba (2) Aqal. – Radio Daljir
Tirada xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo lagu soo koobi doono 225 mudane; baarlamaanka oo yeelan doona laba (2) Aqal.
Garoowe, Dec 22 – Wasiirka waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Juxa oo ka mid ah guddiga qabanqaabada wajiga 2aad ee shirka wada tashiga arimaha dastuurka oo maalintii 2-aad ka socda magaalada Garoowe ayaa shir jaraa’id oo ay guddigaasi ku qabteen xarunta uu shirkaasi ka socdo ka sheegay in ay magacaabeen 2 guddi oo kala ah gudiga dastuurka iyo dib u habaynta baarlamaanka iyo gudi soo xulaya Ergooyinka ka qaybgalaya shir waynaha danbe ee dastuurka lagu ansixin doono.
“Waxaa maanta la guda galay ajandihii shirka, waxaana uu ku socdaa jawi wanaagsan, berina waxaa la filayaa in ay soo baxaan qodobadii laysku raacay” ayuu yiri Md. Juxa.
Dhinaca kala wasiirka ayaa sheegay inay socdaan shirar gaar gaar ah oo ay yeelanayaan madaxda sare sida M/wayne Shariif, M/wayne Faroole, Ra’isalwasaare Gaas, guddoomiye Shariif Xasan iyo M/wayne Caalim iyagoo dusha kala socda hawlaha shirka oo ay wadaan gudiyada farsamada ee loo xilsaaray hawlaha shirkaasi.
Wasiirka ayaa carabaabay suurtagalnimada in ay soo gudibyaan gudiga loo xilsaaray arimaha dastuurka iyo baarlamaanka qorshe xaqiijinaya in la sameeyo baarlamaan ka kooban laba Aqal, ayna xooga saarayaan dib u habaynta baarlamaanka.
Waxaa sidoo kale la sheegay in la isla meel dhigay in tirada xildhibaanada baarlamaanka federaalku ay noqon doonaan 225 mudane, halka ay hadda ka yihiin 550 mudane oo laga dhaxlay shirkii Jibuuti ee 2009.
Baarlamaankii 1960-kii ee Somaliya ayaa ka koobnaa 123 xildhibaan oo 90 ka mid ahi ay matalayeen Koonfurta halka 33 ka mid ahina ay matalayeen Waqooyiga Somaliya.